थाहापाउनुहोस् यी ५ राशिका युवतीहरु जसले प्रेममा कहिल्यै धोका दिँदैनन् ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
थाहापाउनुहोस् यी ५ राशिका युवतीहरु जसले प्रेममा कहिल्यै धोका दिँदैनन् !
२९ श्रावण २०७७, बिहीबार ००:००
मानिसहरुले प्रेममा धोका खाएको धरै सुन्ने गरिन्छ तर प्रमेमा धोका खाएकै कारण आत्महत्या पनि गरेको घटना सुनीरहेका हुन्छौ । तर ज्योतिष शास्त्रअनुसार केहि यस्ता विशेष राशि छन् जुन कहिलै पनि प्रममा धोका दिदैनन् ।
यदि युवतीहरुको कुरा गर्दा खेरि खास गरि यी ५ राशि भएका युवतीले आफ्नो पाटनरलाई धरै प्रेम गर्ने र उनिहरुलाई कहिलै पनि धोका नदिने खालका हुन्छन् ।
ज्यातिषिका अनुसार जान्नुहोस् यी ५ राशि भएका युवतीहरुले जसले आफ्नो पार्टनरलाई कहिलेहि धोका दिदैनन् ।
बृष राशि : यो राशि भएका मानिसहरु शान्त स्वभावका हुने गर्दछन् । जुन युवतीको बृष राषि हुन्छ उनले आफ्नो पाटनरलाई कहिलै पनि धोका नदिने खालका हुन्छन् । यस राशिका युवतिले आफ्नो पाटनरलाई सधै मायालु व्यवहार गर्ने गछर्न् ।
ककर्ट राशि : यस राशिका मानिसहरु निकै भावुक स्वभावका हुने गर्छन् । त्यसकारणले गर्दा ककर्ट राशि भएका युवतीहरुले आफ्नो पाटनरलाई धोका दिदैनन् र आफ्नो पाटनरलाई अरुले भन्दा धरै मायाँ गर्ने गर्छन् ।
कन्या राशि : यस राशिका मानिसहरु धरै नै समझदार मानिन्छन् । यस राशि भएका युवतीले पनि प्रेममा कहिलै पनि धोका दिदैनन् किन भने यिनिहरुमा आफ्नो पाटनरसँग समझदारी गर्ने क्षमता शक्ति बढी हुने गर्दछ । एक विश्वासनियता रहीरहन्छ ।
बृश्चिक राशि : यस राशिका मानिसहरु पनि धरै भावुक नै मानिन्छन् । यस राशिका युवतिहरु आफनो पाटनरलाई एकदमै साचो माया गर्ने मानिन्छ । र यनिहरुले सम्वन्धको महत्व एकदमै राम्रोसँग बुझका हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ त्यसकारण यो राशिका युवतिले कहिलै पनि आफनो पाटनरलाई धोका दिदैनन् ।
मकर राशि : यो राशि भएका मानिसहरु पनि भावुक खालका नै हुने गछन् । यो राशि भएका युवतीहरु जुन केटासँग प्रेम गछन् पुरै सच्चाइ र गहिराइ बुझेर सम्वन्ध जोड्छन् र उनिहरुले कहिलै पनि सम्वन्ध नतोड्ने चाहाना राख्छन् त्यसकारण आफ्नो पाटनरलाई कहिलै पनि धोका दिदैनन् ।
प्रकाशित मिति: Aug 13, 2020
तपाईले बिहान उठ्नेबित्तिकै यस्तो काम गर्नुभएको त छैन?होशियार !
बिहानले दिनको संकेत गर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो समाजमा अझै पनि प्रचलित रहेको छ । कतै
वास्तु विज्ञान : कस्तो जग्गा सर्वोत्कृष्ट हुन्छ ?
उत्तम उपाध्यय न्यौपाने भूमिको खण्ड इशान दिशातर्फ बढेको हुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको स्थानमा निवास गर्ने
हामी घरलाई आकर्षक बनाउन चाहन्छौं तर, जानेर वा नजानेर त्यो भद्रगोल बन्न पुग्छ । घर
सूर्यग्रहण पछि के हुन्छ कोरोना ? कुन राशीको लागि शुभ र अशुभ हुन्छ? (भिडियो )